ရှမ်းပြည်နယ်မှာ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်တွေလှုပ်
ကြာသပတေးနေ့က အင်အားပြင်းငလျင် နှစ်ကြိမ် လှုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ နောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေ ဆက်လှုပ်နေ
ကင်တားနား မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်ရန် သက်တမ်းတိုး
ရွေကြိဂံငလျင် သေဆုံးသူ ၁၃၀ ရှိပြီ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အတည်ပြု
လစ်ဗျားပြဿနာ သံတမန်နည်းနဲ့ရှင်းဖို့ အာဖရိကလိုလား
ဓါတ်ရောင်ခြည်ယိုစိမ့်မှု စောင့်ကြည့်ဖို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်သတိပေး
ရွှေတြိဂံနယ်မြေ ငလျင်ကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၂ ဦး သေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်း သောကြာနေ့ အတည်ပြုမည်
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် မြန်မာ စစ်ဥပဒေချုပ်ကို HRW တိုက်တွန်း
လစ်ဗျား လေယာဉ်မပျံသန်းရဇုန် ထိန်းချုပ်မှု နေတိုးတာဝန်ယူ
ပြင်းအား ၇ ငလျင် ရွှေတြိဂံကို ဗဟိုပြုလှုပ်
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းငလျင် သေဆုံးသူ ၁၅၀ အထိ မြင့်တက်နိုင်
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတွင် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့၌ လှုပ်ခတ်သွားသော အားပြင်းငလျင်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်များကြောင့် သေဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၁၅၀ အထိ မြင့်တက်နိုင်ပြီး ကူညီကယ်ဆယ်ရေး
ထိုင်းနယ်စပ်မှ မြန်မာဘက်သို့ ဓာတ်ဆီတင်ပို့မှု ၂ ဆ မြင့်တက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြင့်တက်မှုကြောင့် ထိုင်းနယ်စပ်မှတဆင့် တရားမ၀င် ဓာတ်ဆီတင်ပို့မှုမှာ ယခင်ကထက် ၂ ဆ တိုးလာကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း အားပြင်းငလျင် လူ ၁၀၀ ကျော်သေ
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း လွယ်မွေဒေသကို ဗဟိုပြု၍ ယမန်နေ့ညက လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ပြင်းအား ၇ ရစ်ချတ်တာ စကေးရှိ ငလျင်ကြောင့် လူ ၁၀၀ ကျော် သေဆုံးနိုင်ကြောင်း
စစ်တပ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ရပ်ရန် HRW ပြော
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများနှင့် လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လေးစားရန် တိုက်တွန်း တောင်းဆို ထားသည့် စာတစောင်ကို အမေရိကန် အခြေစိုက်
ကမ္ဘောဇ လေကြောင်းလိုင်းသစ် မကြာမီ ပြေးဆွဲမည်
ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးနှင့် နီးစပ်သူဟု လူသိများသော ကမ္ဘောဇ ဘဏ်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ကိုဝင်း တည်ထောင်သည့် ကမ္ဘောဇ (KBZ)လေကြောင်းလိုင်းသည် လာမည့်
မြန်မာအလုပ်သမား ၄၀၀ ကျော် အဖမ်းခံရ
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း လဗ်ဘူရီခရိုင် ဘန်ချာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး လုပ်ခမှန်ကန်စွာ မရမှုကြောင့် အလုပ်ရှင်နှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ ပြဿနာတက်နေသည့်
ခေတ်နှင့်လျော်ညီသည့် လုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆို
မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် အလုပ်သမားများအား ခေတ်ကာလနှင့် လျော်ညီသော အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား သွေးစည်း
မီးလောင်မှုကြောင့် မိသားစု ၃ စု အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်
ရန်ကုန် မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၌ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့နံနက်က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နှစ်ထပ်တိုက်တလုံး မီးထဲပါသွားခဲ့ပြီး မိသားစု ၃ စု အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွား
ရုက္ခစိုးနှင့် “ရေနှောက်သည်းပျက်” ချိုကုပ်ဒူးကြီး
ကြွက်စုတ်။ ။ လစ်ဗျားကို ညွန့်ပေါင်း တပ်တွေက အသားကုန် ထုနေတာဆိုတော့ဗျာ … ငါးဖယ်စစ်စစ် ကလေးကို ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ချင်းနဲ့ ရောပြီး သေသေချာချာ ထုထောင်းပြီးမှ အဆုပ်အဆုပ် ဆက်ဖတ်ရန် ...
မြန်မာတွေ ငတုံး၊ ငအ မဟုတ်ပါ
အရှင်ပညာဇောတ (ဒေလီ) - ၅၊ ၃၊ ၂၀၁၁
မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၁
(ရဲရင့်ငယ် ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတာကို ပြန်လည် တင်ဆက်ပါတယ်)
တလောက မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး Democratisation on Myanmar (Burma) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒေလီတက္ကသိုလ် ဇခါဟူစိန်ကောလိပ် (Zakir Husain College) မှာ ကျင်းပတဲ့ ပွဲကို ဦးဇင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကို အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေက ပညာရှင်တွေနဲ့ မြန်မာ့ အတိုက်ခံ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေ ပြောကြဆိုကြတဲ့ ပွဲပါ။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာလေမြို့ မတ် ၂၄ ငလျင်အပြီး မြင်ကွင်း
ဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်မှတဆင့် ရယူပြီး ပြန်လည်တင်ဆက်သည်
“ကျွန်တော် ထွက်ခဲ့တာ မှားလား”
မောင်ဘချစ် အမေရိကရောက်တော့ မိတ်ဆွေတွေကော၊ လူငယ်တွေရော မေးလေ့ရှိတဲ့စကားပါ။ မိမိဒေသမှ ခွဲခွာလာသူအများသည် တတ်နိုင်သမျှ အားတင်းထားကြသော်လည်း တခါတခါ အားငယ်လှသည်။ မိဝေး ဖဝေးသူများလည်း ရှိကြသည်။ အမိနိုင်ငံမှ ခွဲခွာရသော ခံစားချက်များသည် ဖြေလို့မပြေနိုင်ပါ။ သူတို့ကို စဉ်းစားစရာတွေကို ပေးရပေမည်။
“ခင်ဗျားတို့ လင်ကွန်းကို သိလား”
“သိတာပေါ့ဗျာ၊ သူ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတကို မသိရင် ဘယ်သူ့ကိုသိရမှာလဲ”
“သူ ဘယ်မှာမွေးလဲ။ ဘယ်လို အိမ်မှာမွေးလဲ”
ကာတွန်း စောငို - မြေပုံ မှားတဲ့ည
မြန်မာခြိမ်းခြောက်မှု နျူကလီးယားမဟုတ် စကဒ်ဒုံးကျည်
မြန်မာနိုင်ငံက စကဒ်ပုံစံဒုံးကျည်များ ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟူသော သတင်းများသည် ...
မီဒီယာသို့ ပေါက်ကြားသည့် အမေး/အဆိုများ ပယ်ချခံရ
လွှတ်တော်ထဲ မေးမြန်းမည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများသည် မဆွေးနွေးမီ ပြည်ပမီဒီယာများသို့ ...
လွှတ်တော်မေးခွန်း စစ်အစိုးရကို အရောင်တင်သလိုဖြစ်
နေပြည်တော်၌ ကျင်းပနေသည့် လွှတ်တော် များတွင် မေးခွန်းမေးခြင်းသည် စစ်အစိုးရကို ...ဦးဌေးဦး၏ ဆန်ရှင် ကန့်ကွက်ရေးအဆို အတည်ပြု
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ အမတ်ဖြစ်သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ...
ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁ဝ၄ ဦးဟု ဒေသခံများ ပြော
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း လွယ်မွေကို ဗဟိုပြုခဲ့သော ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ...
ဦးထွန်းလွင်၏ မိုးလေဝသ ဝဘ်ဆိုဒ် အတိုက်ခံရ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သတင်းများကို အချိန်မီ တင်ပြပေးနေသည့် ...
ကျောင်းပြင်ရောက် ကလေးများအရေး (၅)
(အင်တာဗျူး) ရန်ကုန်အခြေစိုက် မူလတန်း ကျောင်းဆရာမ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ...
တာချီလိတ်တဝိုက် ငလျင်ကြောင့် လူ ၅ဝ ကျော်သေ
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြာသပတေးနေ့က ...
အခမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်း ဒေသခံအာဏာပိုင် အဖွဲ့က နှောက်ယှက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြံပြုခဲ့တဲ့ အတိုင်း ပညာရေး ကွန်ယက် အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ ပဲခူးတိုင်း အရှေ့ခြမ်း ရေတာရှည်မြို့နယ် ရေနီမြို့မှာ မြို့နယ် NLD အဖွဲ့က စီစဉ်ပေးတဲ့ စေတနာ့ ၀န်ထမ်း သင်ကြားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံ သင်တန်းကို ဒီကနေ့စတင်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေက ဟန့်တား နှောက်ယှက်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေးက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ပုံ Ben Rogers ပြန်ပြောပြ
စစ်အစိုးရ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတွေက ထိမ်းသိမ်းထားစဉ်မှာ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ အများအပြားက သူ့ကို ဖိအားပေး စစ်ဆေးခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆက်ဆံကြတဲ့အကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ ကင်မရာကို စစ်ဆေးရာမှာလည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေရိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုသာ တွေ့ရပြီး ဒီဓါတ်ပုံကိုလည်း ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေက ကူးယူသွားတယ်လို့ Benedict Rogers က အာအက်အေကို ပြောပြပါတယ်။
မကွေး လယ်သမား ၁၇ ဦး မြေသိမ်းခံရမှု အိုင်အယ်လ်အို ကို တိုင်ကြား
မကွေးတိုင်း အောင်လံမြို့ နယ် ရွာမထုန်း ကျေးရွာအုပ်စုက လယ်သမား ၁၇ ဦးဟာ သူတို့ ပိုင်တဲ့ လယ်ယာမြေ တွေကို ဒေသခံ စစ်တပ်က သိမ်းယူလိုက်တဲ့ အတွက် ရန်ကုန်မြို့ က အိုင်အယ်လ်အို ရုံးခွဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက အမှုဖွင့် တိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တ၀ိုက်မှာ မြန်မာဘက်က အစစ်အဆေး များပြား
ရခိုင် ပြည်နယ် မောင်းတော မြို့နယ်မှာ တာလီဘန် မူစလင် စစ်သွေးကြွလို့ ယူဆရသူတွေ ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ အင်းစိန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ သံသယရှိသူဟာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ နယ်စပ်မှာ အစစ်အဆေးတွေ များနေပါတယ်၊
သံဃာတော်အများအပြား ထောင်ဝင်စာတွေမဲ့သူ မရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှာ ဖမ်းဆီး ထောင်ချခံနေရတဲ့ သံဃာတော် အမြောက်အများကို ထောင်ဝင်စာတွေ့ ပြီး ကူညီမဲ့သူ ကင်းမဲ့နေတဲ့အတွက် အဲဒီသံဃာတွေကို ကူညီ ထောက်ပံ့ရာမှာ ပါဝင်ကြဖို့သာသနာ့ ဥသျှောင်အဖွဲ့ ဝင် သံဃာတော်တွေက ဦးစီးပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလှုရှင်တွေကို တိုက်တွန်း နိုးဆော် လိုက်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တွေရလို့ ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားထားပါတယ်။
လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ မြန်မာစစ်တပ်ကို တိုက်တွန်း
မြန်မာစစ်တပ်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ကျူးလွန် နေတာတွေကို ရပ်တန့်အောင် စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အနေနဲ့ မူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ နဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူပေးဖို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက် အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့ကြီး Human Rights Watch က စာရေးသား တိုက်တွန်းလိုက် ပါတယ်။
Posted by saffrontoward at 8:56 PM
Woman Went to Adopt2Kittens But Couldn't Get Their Special Needs Brother Out of Her Mind - Love Meow
Milwaukee police release 'disturbing' video of Bucks player's arrest - Washington Post
World Cup: Jack Butland spoke to 'hero' Joe Hart after England omission
Bishop Michael Curry: Preacher who gave sermon at royal wedding to protest Donald Trump outside White House
Dodd-Frank 'rollback'? What bipartisan easing of bank rules could mean.
နာနတ်သီး စည်သွတ်စက်ရုံ ပုလိပ်ဝင်ဖမ်းသဖြင့် ကုန်ထုတ...
သင်္ကြန်တွင်းမှာ လူငယ်များ အထူးသတိထားကြဖို့ လမ်းပြကြ...